Kaydiyaha/Account Ardayga Cuntadisa | Bloomington Public Schools - District #271
Home / Cuntada habka ay u shaqayso / Kaydiyaha/Account Ardayga Cuntadisa
Numberka kaydka/Account cuntada
Ardayda wuxuu u bahanyhay in uu ku garaco kay padka numberka kaydiyahoda/account. Waxaa la’idin soo diraya intuusan iskuulka bilawan number ee tahay in uu ardaygu xafido, wuxuuna idinku imanaya bostada. Numberkan waxaa ku jiro mid security code ah. Fadlan cunugada ku caawi in uu barto numberkan. Waxad practice ku suubin kartin calculatorka.
Qarashka Ardayga ku baxa
Ma’ogtahay inad xadidi kartit qarashka ku baxa cunugada kaydka/account cuntadisa? Kusheen ama Jikada iskuulka ayad soo wici karta waxadna xadidi karta qarashka ka baxa cunugada kaydkisa/account. Sowac kushinka iskulka ama meesha laga xukumo cuntada oo numberkeda yahay 952-681-6570.
Waxad kaloo ka heli karta online oo aad ka fiirin karta balanciga kaydiyaha/account ardayga. www.paypams.com
Cuntada lacag la’anta ama qiimaheda la jabiyey
Waxa laga yaba in qoosku xaq u lahado cuntada lacag la’anta ama qiimaheda la jabiyey. Waa inad sanad walba buuxsata applicationka Nafaca Waxbarashada. Waxaad foomka ka heli karta iskuuladka, Xafiiska xarunta ku shaqaleh cuntada ama halkan Application for Benefits page. Hadii laguu ogolado waxa lagu ogalanaya qurac iyo qado kaliya oo kujira caano. Caano hadad gadanaysid oo goni ah na waa .45.